Basic hacking Techniques eBook (PDF) free Download - Khit Minnyo
Hacking Techniques Basic hacking Techniques eBook (PDF) free Download
by KhitMinnyo on August 01, 2020 in e-books, Hacking, Hacking Knowledge, Hacking Techniques
လွယ်ကူလေ့လာ အခြေခံ Hacking နည်းပညာ စာအုပ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံး ရေးသားထုတ်ဝေဖြစ်တဲ့ စာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ Hacking ကို ခုမှ စ လေ့လာမယ့်သူတွေအနေနဲ့ သိထားသင့်တဲ့ အခြေခံအကျဆုံး အကြောင်းအရာတွေကို CEH lessons တွေပေါ် အခြေခံပြီး ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ပါ။ စာအုပ်အနေနဲ့ကတော့ ကုန်သွားပြီဖြစ်လို့ ဘယ်မှာမှ ဝယ်လို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် PDF Version အနေနဲ့ မည်သူမဆို အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ အခြားသူတွေကို ပြန်လည် မျှဝေလိုပါကလည်း ယခု Post Link ကို ဝေမျှနိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်ကို ဒေါင်းယူပြီး အခကြေးငွေနဲ့ ပြန်လည်ရောင်းချနေသူများ ရှိတဲ့အတွက် ထိုသို့ ပြန်လည်ရောင်းချခွင့် မပြုပါကြောင်း ကြိုတင် ပန်ကြားပါရစေဗျ။
စာအုပ်ကို ဒေါင်းယူရရှိနိုင်မယ့် Link ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ Direct Link ဖြစ်ပြီး မည်သည့် Ad မှ ချိတ်မထားပါ။ စာအုပ်တိုင်းကို ဝယ်ယူအားပေးကြသော နည်းပညာချစ်သူများ အားလုံးကို အထူး ကျေးဇူးတင်လျက်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ယခု PDF တွင် ပါရှိသော Member Form ကို အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။ ကြာပြီဖြစ်လို့
Facebook Group လည်း Active မဖြစ်တော့ပါ။
By KhitMinnyo on August 01, 2020
Labels: e-books, Hacking, Hacking Knowledge, Hacking Techniques
zawko August 11, 2020 at 3:04 AM
shwenithar August 11, 2020 at 5:03 PM
Unknown November 21, 2020 at 6:23 PM
Unknown July 31, 2021 at 2:06 AM
Thanks sir .🙏🙏🙏
Joel October 16, 2021 at 2:14 AM
I discovered your website internet site on the internet and appearance some of your early posts. Always keep up the very good operate. I simply additional increase your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to readingalot more on your part down the line!… white house market
abdul quddos October 20, 2021 at 7:02 AM
https://www.hackerone.com/for-hackers/how-to-start-hacking Join the world’s largest community of ethical hackers and start hacking today! Be challenged and earn rewarding bounties. Learn more!